एक बर्षमा आधा दर्जनको मृत्युः ‘ज्यानमारा’ अस्पतालका रुपमा चिनिदै ओम | Citizen Post News
एक बर्षमा आधा दर्जनको मृत्युः ‘ज्यानमारा’ अस्पतालका रुपमा चिनिदै ओम
२०७४ साउन १९ गते १९:४३
काठमाडौं, १९ साउन । चाबहिलस्थित रहेको ओम अस्पताल ‘ज्यानमारा’ अस्पतालका रुपमा चिनिन थालको छ । एक बर्षमा आधा दर्जन व्यक्ति उपचारका क्रममा चिकित्सकको लावरवाहीका कारण ज्यान गुमाएपछि अस्पतालको छविमा आंच आएको हो । पत्थरीको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा विहिबार पनि एक महिलाको मृत्यु भयो । उपचारका क्रममा चिकित्सकले लापरवाही गरेको भन्दै मृतकका आफन्त आन्दोलित भए । गोरखा जिल्ला स्थायी घर भई हाल चाबहिल बस्दै आएकी ५५ वर्षीया नन्दकुमारी लामिछानेको उपचारका क्रममा मृत्यु हो । अस्पतालले घटनालाई लुकाउन खोजेको पीडित पक्षको आरोप छ । तर अस्पतालले आफ्नो कुनै दोष नभएको र ह्रदयघातका कारण विरामीको मृत्यु भएको दावी गरेको छ । मृतकका आफन्तले प्रदर्शन गर्नेवित्तिकै प्रहरी बोलाएपछि अस्पतालमा हुने संभावित तोडफोड टेरेको थियो । आन्दोलनमा उत्रिएका पीडितका आफन्तले भने ओम अस्पताललाई ‘ज्यानमारा’ अस्पतालको संज्ञा दिए । डा.भोला रिजालको मुख्य लगानी रहेको उक्त अस्पतालमा महिना विराएर यस्ता घटना हुन थालेपछि सर्वसाधारणमा भने त्रास फैलिएको छ । पीडितका एक आफन्त भन्छन्,‘अस्पतालमा उपचार गर्न जान पनि अब त डराउनु पर्ने अवस्था आयो । पहिला अस्पताल गएपछि अब चाहिं बांचिन्छ भन्ने लाग्थ्यो । अहिले अस्पताल पुगेपछि मार्ला कि भन्ने डर लाग्छ ।’ महिना विराएर यस्ता घटना घट्न थालेपछि सर्वसाधारणले अस्पताललाई शंकाको नजरले हेर्नु पनि स्वभाविक हो । जसका कारण उपचारका लागि अस्पताल जान समेत डराउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
गत बैशाख १५ गते गर्भवती महिला सावित्री श्रेष्ठको मृत्यु भयो । मृतकका आफन्तले अस्पतालको लापरबाहीबाट ज्यान गएको भन्दै अस्पतालमा घेराउ गरे । काठमाडौंको कपन बस्ने गर्भवती ति महिलाको पटेमा ७ महिनाको बच्चा थियो । पेट दुखेपछि उनी आफै हिंडेर अस्पताल पुगेकी थिइन । उक्त घटनामा पनि अस्पतालले लापरबाही गरेको आरोप लगाइएको थियो । रातको समयमा विरामीलाई वेथाले च्याप्दा उपचार गर्ने चिकित्सक नभेटेपछि अस्पतालले लापरवाही गरेको भन्दै मृतकका आफन्त आन्दोलित भएका थिए । भोलीपल्ट बिहान अवस्था गम्भीर भन्दै आइसियुमा राखियो । तर चिकित्सकले श्रेष्ठलाई बचाउन सकेनन् । उनलाई मस्तिष्कघात भएको अस्पतालका सञ्चालक डा.भोला रिजालले बताएका थिए । मृतकका आफन्त आन्दोलित भएपछि उनका सन्तानलाई पढाइदिनेलगायतका अनुचित प्रस्ताव अस्पतालले राखेको सार्वजनिक भयो । मृत्युपछि मञ्जुरीनामा लिन खोज्दा आफन्त प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
गत असोज २१ गते उपचारकै क्रममा अर्का एक बिरामीको मृत्यु भयो । चिकित्सकले उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै मृतकका आफन्त आन्दोलित भए । अस्पतालको सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई नै बोलाउनु पर्यो । मृतक संखुवासभाकी ५२ वर्षीय टंककुमारी न्यौपाने थिइन् । उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि उनका आफन्त, गाउंलेलगायत विरोधमा उत्रिए । उनी महिनावारी हुंदा अत्याधिक रक्तश्राप भएको भन्दै असोज १३ गते अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन । अस्पतालले विरामीको पछिल्लो दुई दिनको रिपोर्ट नदिएको तथा मृत्युको कारण नभनेको भन्दै आफन्त आक्रोशित भएका थिए । मृतकलाई डाक्टर जाहेश्वर गौतमको नेतृत्व टोलीले उपचार गरेको थियो ।
गत माघ १७ गते पनि त्यस्तै अर्को घटना अस्पतालको परिसरमा देखियो । चिकित्सकको लापरबाहीका कारण एक सुत्केरी महिला मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले प्रर्दशन गरे । मृतक ताप्लेजुङकी शोभा थेवे लिम्बु थिइन । उनको शिशु जन्मिएको दुई दिनपछि मृत्यु भएको थियो । शल्यक्रिया गरेको दुई दिनसम्म अचेत रहनु र निधन भएको धेरै पछाडि मात्र आफन्तलाई खबर गर्नुले आशंका जन्माएको भन्दै मृतकका आफन्त आन्दोलित भएका थिए । उनीहरुले चिकित्सकको उपचारका क्रममा चरम लापरवाही गरेको जिकिर गरेका थिए । मृतकले दोस्रो सन्तानका रुपमा त्यतिबेला छोरा जन्माएकी थिइन् । उनको उपचारमा डा.सुपात्रा कोइराला र अन्य चिकित्सकहरु सहभागी थिए । लापरवाहीका कारण शिशु जन्मिएको दुई दिनपछि आमाको मृत्यु भएको भन्दै शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकहरुमाथि कारवाहीको माग भयो । अस्पतालले आफ्नो कुनै दोष नरहेको दलिल पेश गर्याे । डा. रिजालले शल्यक्रिया सफल भइसकेपछि अचानक मुटुमा समस्या देखिएको र मुटुको उपचार गर्ने क्रममा उनको मृत्यु भएको जानकारी गराए । उनले उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरु छानविनबाट दोषी प्रमाणित भए कारवाही र क्षतिपूर्तिका लागि आफू तयार भएको घोषणा पनि गरे । प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भयो । अस्पतालले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडितलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दियो र घटना साम्य भयो ।
मेडिकल काउन्सिलको सक्रियता ख्यै ?
दर्जनौं विवादास्पद घटनामा कुनै पनि छानविन नगरी अस्पताललाई उन्मुक्ति दिंदा यस्ता घटनामा बृद्धि भएको कतिपयको भनाई छ । कतिपय घटनामा पीडित परिवार र अस्पतालको समझदारीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन् । तर, एउटै अस्पतालले पटक–पटक गल्ती गरिरहन्छ भने केही न केही पक्कै हुन्छ । चिकित्सकको लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको आरोप लागिसकेपछि किन मेडिकल काउन्सिलले छानविन गर्दैन ? कि ठूलोलाई चाहिं कानुन लाग्दैन ? गम्भिर प्रश्न उब्जेको छ । अस्पताल र चिकित्सकमाथि छानविन नहुने र चिकित्सकको लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको आरोप लागिरहने हो भने अस्पतालप्रतिको आस्था एक दिन सकिने निश्चित छ । बेलैमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।